Are dị ike karịa ka ị na-eche-News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
I siri ike karịa ka ị chere
Gbasiri gị ike? Nke a bụ ajụjụ siri ike ịza, ma ị bụ nwoke ma ọ bụ nwanyị. Mana, n'ezie, achọrọ m ịjụ… olee otu ị ga-esi kọwaa ike gị? Kedu ka ị si mara oke gị? Kedu ka isi mara oke ego ị nwetara? Mgbe ihe nrụgide bịara, anyị na-achọpụta na anyị siri ike karịa ka anyị chere.
Gịnị bụ Ike? Ike abughi mgbe nile banyere ike aru di ocha. Kama nke ahụ, ọ bụ banyere ike. ịdọ aka ná ntị. nkwali. Ọ bụ maka ikike ime ihe. Amaara m ụfọdụ ndị nwere ọgụgụ isi siri ike, mana ha anaghị arụ ọrụ ha nke ọma. Amaara m ndị ọzọ na-achọta ọrụ na-esiri m ike, mana ha na-enwe ike ịkwaga ugwu site n'ịgba ọsọ na ịrụsi ọrụ ike. Ha nwere ume dị n’ime. Ihe na-adọrọ mmasị karị bụ na ndị ọrụ a na-arụsi ọrụ ike anaghị achọpụta ibu ahụ. Ọ bụghị naanị na ndị bystanders na-eju anya, kama ha na-ajụkarị, sị, “Olee otu ị ga-esi mee ya?” Azịza ya na-abịakarị, “Ana m arụsi ọrụ ike karịa ndị ọzọ.” Ya mere, gịnị mere ụfọdụ ndị ji enwe ike imekwu ihe? Kedu ihe na-enye ha mgbakwunye ụgbọala? Gịnị na-enye ha ike? O nwere ike ịbụ na ha enyelarị onwe ha ịmekwu?
Oke Nke Onwe
Ihe m chọpụtara bụ na ọtụtụ mmadụ na-etinye oke nke ha. Ha na-amachi mmeputa ha dabere na mgbochi onwe ha nke ikike na ike ha. Mgbe ụfọdụ ókèala ndị a na-adabere na ahụmịhe gara aga. Mgbe ụfọdụ, ha na-adabere n’iche ikike. Mgbe ụfọdụ njedebe ndị a na-adabere na enweghị ihe ọ bụla.
Enweghị m ike ime nke ahụ. (N'ihi gịnị?)
Nke ahụ karịrị m ike. (Kedu ka i siri mara?)
Enweghị m ike itinye nnukwu mgbalị ahụ. (Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na i mee?)
Amaghị m nke ọma iji dozie nke ahụ. (You nwere ike ijide n'aka ma ọ bụrụ na ịnwalebeghị?)
Yabụ, kedu ka anyị ga-esi emebi ókèala ndị a? Olee otu anyi ga esi esiwanye ike?
Ọtụtụ ndị mmadụ na-agagharị agagharị, mana enweghị ebe dị nso na oke ha. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịdị ike karị, ị ga-akwagide oke gị. Uskwanye ya bụ ihe ọ ga - ewe iji mee ka njedebe gị bawanye. N'ime mgbatị ahụ, bodybuilders chọpụtara nke a ogologo oge gara aga. Ma, otu ụkpụrụ ahụ bụ eziokwu ma a bịa n'ihe banyere ike ime. Dọ aka ná ntị na ịkwọ ụgbọala. Chọrọ nwalee oke gị? Kwaa onwe gị. Nwaleenụ onwe gị na-achọpụta ihe mgbochi iji chọpụta ma ha ziri ezi. Gbalia ihu na ebum n’uche gi kariri ihe ichoro ime. I Dị Ike Karịa Ka I chere. Otutu mmadu na-eleghara ike ha anya. Ka ị na-aga ụbọchị gị, gbaghaa ikike gị. Nwalee oke gị. Na-agbanye onwe gị, ịchọta ezigbo ókèala gị ma kọwaa ike gị. Mgbe ị chọpụtara ego ole ị nwetara, o nwere ike iju gị anya. Kedu ihe mgbochi nke aka gị? Kedu nke ịkwesịrị ịkwanye? Ini ewe ke okokụt ke afo ama okop odudu akan nte ekekerede?
Nkọwapụta ederede: ihe odide mbụ na eserese bụ nke onye nwe ya nweburu.Ọ bụrụ na iji ikpe a eme ihe n'ụzọ na-ezighi ezi, biko kpọtụrụ anyị n'oge kwesịrị ekwesị, anyị ga-ehichapụ na nke mbụ.
Previous: Oge mgbụsị akwụkwọ bụ oge owuwe ihe ubi
Ọzọ: Obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ nke Alice!